ဝန်ဆောင်မှု - Hebei Co. , Ltd မှထုတ်ပိုး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ၏စိတ်ကူးဒီဇိုင်း, QUALITY ဖြစ်စေလျက်, 24HOURS အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်။ စုဆောင်းအတွေ့အကြုံ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ထမ်းများနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အဝကူညီနေတဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်များနှင့်အာမခံချက်ရှိပါသည်။
အရည်အသွေးစံ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစဉ်မပြတ်စုဆောင်းအတွေ့အကြုံနှင့် ပို. ပို. ဖွံ့ဖြိုးပြီးကုန်ထုတ်စွမ်းအားအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့, etc ASTM, က ISO နှင့်ကုလသမဂ္ဂ, အဖြစ်အားလုံးနီးပါးအရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများ၏အိတ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစနစ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကျေနပ်အောင်အာမခံရန်ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်။ ဒီစနစ်ထုတ်လုပ်မှု၏တပြင်လုံးကိုသင်တန်းအောက်ပါအတိုင်းနှင့်ထိန်းချုပ်, ဖြစ်နိုင်သမျှအမှားများကိုတွေ့ရှိနှင့်အချိန်အတွက်ပြဿနာများကိုမဆိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်၌ရှိသော link ကိုချောအိတ်၏ဝယ်လိုအားနှင့်အတူလိုက်နာကြောင်းသေချာ။
အရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်စစ်ဆေးရေး - ကျနော်တို့ဖောက်သည်-လိုအပ်သောစံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီအိတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုဂ္ဂိုလ်များထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ key ကိုလင့်ခ်မှာနေ့တိုင်းထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ရန်နှင့်သင့်ဝယ်လိုအားကျေနပ်ဖို့ချောအိတ်စမ်းသပ်လိမ့်မယ်။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်၌ရှိသမျှသောသင်၏တောင်းဆိုမှုမှာအမေရိက, ဥရောပနှင့်သြစတြေးလျအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ခွဲခန်းများအတွက်စမ်းသပ်မှုများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ချက်ချင်းသင့်ရဲ့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များမဆိုဖို့ reply မည်, တနေ့လုံးတိုက်ရိုက်ချက်တင်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှပင်အများဆုံးရှုပ်ထွေးမေးခွန်း 24 နာရီအတွင်း reply ဖို့ကတိပေး။
ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ဆင်ရေးဦးစီးဌာန 24 နာရီအတွင်းတင်ပို့ကုန်စည်အသေးစိတ်အကြံဉာဏ်ကိုပေးတော်မူမည်နှင့်ချက်ချင်းဆက်စပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမေးခွန်းများသင့်လျော်သောဖြေရှင်းနည်းများအခြေချမည်ဖြစ်သည်။